Miato ny fiampitana biby ho an'ny iOS; ho tonga manomboka aprily | Vaovao IPhone
Elaela i Nintendo nanapa-kevitra ny handefa lalao finday, saingy anaram-boninahitra sy antsasaky ny antsasaky ny fizarana vao hahitana ny tombony azony. Ny fanombohana ny Pokémon GO, lalao izay natombok'ilay goavana lalao video Japoney niaraka tamin'i Niantic, narahin'ny Super Mario Run izay nahatonga azy ireo hahazo vola be, ary amin'izao fotoana izao dia tsy vitsy ireo miandry lohanteny vaovao roa : kinova Fire Emblem finday ary iray hafa an'ny Animal Fiampitana, ilay mpandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity.
Androany, talata, araka ny The Verge, Nintendo dia nanaiky fa ny kinova iOS an'ny Animal Crossing ho tonga tara kokoa noho ny nandrasana, izay tamin'ny faran'ny volana martsa lasa teo. Ny lalao vaovao sy nandrasana hatry ny ela dia tsy ho tonga raha tsy manomboka ny taom-piasana manaraka, izay hanomboka amin'ny aprily 2017 ary hifarana amin'ny martsa 2018. Ny fahatarana voalohany ny kinova voalohany ho an'ny iOS of Animal Crossing and Fire Emblem dia tokony to Nintendo te-hifantoka amin'ny anaram-boninahitra finday voalohany, dia ny Super Mario Run.
Animal Crossing dia tsy ho tonga raha tsy amin'ny volana aprily farafaharatsiny
Ny vaovao momba ity fahatarana vaovao ity dia nomena tamin'ny tatitra ny fandanjana ara-bola farany an'ilay lalao video japoney goavambe, izay nahatratraran'ny orinasa ny tombony azon'ny € 530,42M sy € 1.400M amin'ny fidiram-bola. Ny varotra tena zava-dehibe dia tratra tamin'ny lohateny toy ny Pokémon Sun sy Pokémon Moon, anaram-boninahitra Nintendo 3DS roa izay nahatratra ny varotra mitentina 15 tapitrisa kopi, arahin'ny Super Mario Maker, koa avy amin'ny Nintendo 3DS, izay nivarotra kopia 2 tapitrisa.
Tamin'ny fifandanjana isan-telo volana dia tsy nanome isa ny zava-bita Super Mario Run, lalao izay sintonina in-tapitrisany ary nividy 9.99 € namboarina. Tsy fantatra ny antony tsy nanomezan'izy ireo tarehimarika ho an'ny lalao Mario voalohany hipetraka ao amin'ny App Store, saingy manome ny fiheverana fa te-handrakotra fandraisana malina kokoa noho ny nandrasan'ilay goavambe japoney izy ireo. Ny Super Mario Run indray ve no omena tsiny noho ny fahatarana vao amin'ny Animal Crossing?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Miato ny fiampitana biby ho an'ny iOS; dia ho tonga manomboka amin'ny volana aprily